युट्युबका यी उपयोगी ट्रिक्स, तपाईंले प्रयोग गर्नुभयो त ? – खबर खुराक
Reading: युट्युबका यी उपयोगी ट्रिक्स, तपाईंले प्रयोग गर्नुभयो त ?
ओरजिनल गीतको भिडिओ पत्ता लगाउने तरिका
युट्युबमा भिडिओ हेर्दा डेटा बचाउने तरिका
युट्युबको लोकेसन परिवर्तन गर्ने तरिका
त्यसपछि त्यहाँ तल लोकेसनको अप्सन देख्न सक्नुहुछ । त्यहाँ गएर आफूलाई आवश्यक परेको देश छान्न सक्नुहुन्छ ।
स्ट्याट्स फर नर्ड्स (Stats For nerds)
त्यसपछि सेटिङमा जानुहोस् । त्यहाँ गएर ‘जेनेरल’ भन्ने अप्सनमा ट्याप गर्नुहोस् ।
जुम गरेर भिडिओ स्क्रिनमा फिट गर्ने तरिका
सबै च्यानलबाट नोटिफिकेसन आफूले चाहेको समयमा आउन मिल्ने बनाउने
आफूले पठाउन चाहेको भिडिओलाई कुन समयबाट हेर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यो लिंक पठाउने तरिका